Amaxwebhu eYunivesithi yaseColorado State kwi-bat pathogen yophando-Ilungelo laseMelika lokwazi
ezaposwa ngomhla January 21, 2021 by USainath Suryanarayanan
Esi sithuba sichaza amaxwebhu oonjingalwazi baseColorado State University (CSU) uRebekah Kading kunye noTony Schountz, nelungelo lase-US lokuLwazi elifunyenwe kwisicelo seerekhodi zoluntu. UKading kunye no-Schountz zii-virologists ezifunda izifo ezinxulumene nelulwane kwiindawo ezishushu kwihlabathi liphela. Basebenzisana ne-EcoHealth Alliance, iSebe lezoKhuselo lase-US (i-DoD) kunye ne-Arhente yeeProjekhthi zoPhando oluPhambili (i-DARPA), uphando lwezomkhosi wase-US nengalo yophuhliso.
La maxwebhu abonisa umbono kwi ezintsonkothileyo zemikhosi yezenzululwazi abafunda ngendlela yokuthintela ukuvela kwezinto ezinokubangela ubhubhane kumalulwane. La maxwebhu aphakamisa imibuzo malunga nomngcipheko wokosuleleka, umzekelo, ukuthunyelwa kwamalulwane kunye neempuku ezisulelwe zizifo eziyingozi. Ziqulathe ezinye izinto eziphawuleka, kubandakanya:
NgoFebruwari 2017, abaququzeleli be-DoD yeNkqubo yeNtsebenzo ye-Biological Engagement ye-Arhente yokuNcitshiswa kweNgozi yoKhuselo umemezele umfelandawonye omtsha welizwe jikelele "ukwakha nokunyusa amandla elizwe kunye nemimandla ukuvelisa ukuqonda okuphuculweyo kwamalulwane kunye nendalo kwindawo yokujongana nezifo ezikhuselayo." Inxulumene noku, ii-imeyile bonisa intsebenziswano phakathi kwe-CSU, i-EcoHealth Alliance kunye namaZiko eSizwe e-Rocky Mountain Laboratories ukwakha indawo yophando ye-bat kwi-CSU ukwandisa izifundo zosulelo.
Umdibaniso welizwe lonke weqela uguquke waba liqela elibizwa ngokuba yiBat One Health Network Network (IBOHRN). Ngo-2018, izazinzulu eziphambili ze-BOHRN zazisebenza ne-DARPA kwiprojekthi ebizwa ngokuba yi-PREEMPT. Iirekhodi ze-CSU kwi-PREEMPT bonisa ukuba iRocky Mountain Laboratories, i-CSU kunye ne-Montana State University baphuhlisa izitofu "ezinokuchaphazeleka ezinokuchaphazeleka" ukuze zisasazeke kubemi bamalulwane "ukunqanda ukuvela kunye nokusasazeka" kweentsholongwane ezosulelayo ezivela kumalulwane ziye kubemi babantu. Injongo yabo kukuphuhlisa “izitofu ezizisasaza ngokwazo ” -Esasazeka ngokusasazeka phakathi kwamalulwane-ngethemba lokususa ii-pathogen kwindawo yazo yezilwanyana ngaphambi kokuba kudilike ebantwini. Olu phando luphakamisa xhalaba malunga neziphumo ebezingalindelwanga zokukhulula izinto ezizisasaza ngokwasofuzo, kunye nemingcipheko yendalo yendaleko yabo engaziwayo, ubundlobongela kunye nokusasazeka.
Ukuhambisa amalulwane kunye neempuku ezosulelwe zizifo eziyingozi kudala ukubakho kokungathandeki okungafunekiyo ebantwini. UTony Schountz wabhala kwi-EcoHealth Alliance VP uJonathan Epstein ngo-Matshi 30, 2020: "I-RML [Rocky Mountain Labs] ingenise indawo yokugcina intsholongwane ye-Lassa ngokubazalela ekuthinjweni e-Afrika, emva koko inzala yathunyelwa ngqo kwi-RML. Andazi nokuba amalulwane amahashe angazalwa esekuthinjweni, kodwa leyo ingayindlela yokunciphisa inkxalabo yeCDC. ” Intsholongwane yeLassa Isasazwa ziimpuku ezixhaphakileyo entshona Afrika. Kubangela ukugula kakhulu okubizwa ngokuba yiLassa fever ebantwini, ekhokelela ekuqikelelweni kwabantu abangama-5,000 1 ngonyaka (XNUMX% izinga lokufa).
NgoFebruwari 10, 2020, uMongameli woMbutho we-EcoHealth uPeter Daszak uthumele i-imeyile Ukucela abatyikityo ukuba bayile The Lancet mazwi "Ukugxeka kabukhali iithiyori ezibonisa ukuba i-2019-nCoV ayinayo imvelaphi yendalo." Kule imeyile, uDaszak wabhala: “UGqr. U-Linda Saif, u-Jim Hughes, u-Rita Colwell, u-William Karesh kunye no-Hume Field bayile ingxelo elula yokuxhasa oososayensi, ezempilo yoluntu kunye noochwephesha bezonyango e-China abalwa noku kuqhambuka (kuqhotyoshelweyo), kwaye siyakumema ukuba usijoyine njengabasayini bokuqala. ” Khange akhankanye ukubandakanyeka kwakhe ekuyileni ingxelo. Ingxelo yethu yangaphambili bonisa loo nto UDaszak wayila ingxelo eyayipapashwe kwi Lancet.
UTony Schountz watshintshisa ii-imeyile kunye ne-Wuhan Institute of Virology (WIV) zezenzululwazi uPeng Zhou, uZhengli Shi kunye noBen Hu. Kwi i-imeyile yomhla we-30 ka-Okthobha u-2018, USchountz wacebisa uZhengli Shi “umanyano olungavumelekanga” phakathi kweLebhu ye-Arthropod ehanjiswa yi-Arthropod ne-Infectious Disease Laboratory ne-WIV, ebandakanya “intsebenziswano kwiiprojekthi ezifanelekileyo (umz., Iiarboviruses kunye ne-bat-borped-virus) kunye noqeqesho lwabafundi.” UZhengli Shi uphendule kakuhle Ingcebiso kaSchountz. Iirekhodi azibonisi ukuba nayiphi na intsebenziswano iqalile.
Ikhonkco kulo lonke ibhetshi yamaxwebhu e-Colorado State University anokufumaneka apha: Iirekhodi ze-CSU
Ilungelo lase-US lokwazi ukuthumela amaxwebhu afunyenwe ngenkululeko yoluntu yokufumana ulwazi (FOI) yezicelo uphando lwethu lweBiohazards Kwiposi yethu: Amaxwebhu e-FOI kwimvelaphi ye-SARS-CoV-2, iingozi zokufumana umsebenzi kunye neelebhu zokutya.
IiBiohazards, IBhlogazards Blog ilulwane lwamalulwane, iinkxalabo malunga nokukhuseleka, Umanyano lwe-EcoHealth, Inkqubo yemikhosi yezomkhosi, izifo ezinokubangela ubhubhane, imingcipheko kunye neengozi zeziqulatho eziphezulu zokuthintela ukhuseleko, IZiko leNzululwazi yeWuhan